‘माझी समुदायका लागि लड्न झन हौसला मिल्यो’– सांसद रिता माझी – NamoBuddha Khabar
‘माझी समुदायका लागि लड्न झन हौसला मिल्यो’– सांसद रिता माझी
शनिबार, पौष १५, २०७४ | १६:२१:०५ |
ठुला दलले अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर नदिएको चर्चा चलिररहदा समानुपातिकतर्फ राप्रपाबाट प्रदेश नम्बर ३ का लागि सांसद बन्नु भएको छ रिता माझी । रामेछाप मन्थली स्थायी घर भएका माझी यसअघि भएको दास्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा प्रत्यक्षतर्फ र स्थानिय चुनाव २०७४ मा मन्थली नगरपालिकाको उपमेयरमा लड्नुभयो तर पराजित हुनुभयो । आफ्नो समुदायको हकहितका लागि नीतिनिर्माणको तहमा पुगेरै छाड्ने अठोट कहिल्यै मरेन उहाँमा, माझीका अनुसार ति परीक्षाहरुबाट उर्जा आर्जन भईरह्यो,फलस्वरुप आज प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभा सदस्य चुनिनुभएको छ । राप्रपाको कुन्द्रिय महिला विभाग सदस्य तथा नेपाल माझी महिला उत्थान संघका केन्द्रिय अध्यक्ष समेत रहेका माझी भन्नुहुन्छ –‘माझी समुदायका लागि लड्न झन हौसला मिलेको छ ।’
अब के छन् त आफ्ना समुदायको लागि योजनाहरु ? यसबारे यो पटक नमोवुद्ध खबरले तिनै सांसद माझीसंग भलाकुसारी गरेको छ । सांसद बन्नुभयो, कस्तो अनुभुति गर्दै हुनुहुन्छ ?
म धेरै खुसी छु, आफ्नो समुदाय र मेरो प्रदेशका जनतासंग अझै नजिक रहेर काम गर्ने अबसर पाउदैछु । जनतामाझ वास्तवमा मेरो परीक्षा भर्खरै सुरु भएको छ, अब झन म, मेरो पार्टी र जनताप्रति जिम्मेवार भई खटिनुपर्छ । पार्टी र जनातको काम गर्नुपर्छ । मैले यो ठाउँ पाउनु पनि आफैंमा सहज थिएन, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट देशभर प्रदेश नम्बर १,३ र ६ मा १÷१ जना गरी हामी ३ जनाले मात्रै यो महत्वपुर्ण ठाउं पाएका छौं । एतिहासिक मान्नुपर्छ राज्यबाट उपेक्षामा पारिएका हामी माझी समुदायलाई राप्रपाले विश्वास गर्यो,जनताले मत दिनुभयो,म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चहान्छु ।
२०७४ मा स्थानिय निकायको निर्वाचनमा मन्थली नगरपालिकाको उपमेयरका लागि लडें, ति दुईवटै चुनावमा हारें तर जीवनमा मैले हार महसुस कहिल्यै गरिन,जीवनमा राजनीति के हो भन्ने सिक्ने मौका मिल्यो,मसंग जाँगर हराएको थिएन,समुदायप्रतिको समर्पण अलिकत्तिले पनि डगमगाएको थिएन
हिजो हार्दा र आज समानुपातिकबाट सांसद बन्दाको अनुभुतिचाँहि ?
७० सालमा स्रविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षमा लडेंकी थिएँ, २०७४ मा स्थानिय निकायको निर्वाचनमा मन्थली नगरपालिकाको उपमेयरका लागि लडें, ति दुईवटै चुनावमा हारें तर जीवनमा मैले हार महसुस कहिल्यै गरिन,जीवनमा राजनीति के हो भन्ने सिक्ने मौका मिल्यो,मसंग जाँगर हराएको थिएन,समुदायप्रतिको समर्पण अलिकत्तिले पनि डगमगाएको थिएन, आज म समानुपातिकबाट जनताको मतलेनै सांसद भएर आएकी छु, समयसंगै यसरी तितामिठा क्षणपरीस्थीति भोग्दै आएको छु ।
के छन् जनताका समस्या अनि के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो मुलुक विकासकै क्रममा छ, विकासमा भर्खर बामे सर्दै छ भन्दा फरक नपर्ला, हिजोका दिनमा माझी महिला उत्थान संघको कार्यक्रम तथा चुनाव प्रचारप्रसारकै क्रममा रामेछापको आलवा धादिङ,सिन्धुपाल्चोक,नुवाकोट,मकवानपुर लगायतका विभिन्न जिल्लाका गाउँ गाउँ पुगें । गाउँमा बाटोघाटो पुग्न थालेको देखियो तर व्यवस्थीत छैनन्, दुरदृष्टिविनाको विकासले झन भुक्षय,प्रदुषणमा बल पुगेको छ । धारो छ पानी छैन, विद्यालय छन् गतिलो शिक्षा छैन,फोन छ गुणस्तरीय सेवा छैन, खेतवारी बाँझै छन् हामी भने बजारबाट किनेर खाईरहेका छौं । हामी कत्ति महंगिमा ठगिएका छौं । त्यसैले दिगो विकासका योजना बनाउन जरुरी छ । युवा रोजगारमा ध्यान दिनुपर्छ । मेरो जिल्ला रामेछापमा त खानेपानीकै हाहाकार छ, भुकम्पले घरवास उठाएको २ वर्ष हुन लाग्यो, उहाँहरुको रोजीरोटी खोसिएका छन्, सबैभन्दा पहिला त उहाँहरुलाई घरभित्र ल्याउनुपर्छ । यो पुष मसान्तभित्र घर बनाउन सुरु गरीसक्न सरकारले सुचना जारी गरेको छ तर पिडितहरुको व्यवहारिकतालाई सरकारले वुझिराखेको छैन । यसका लागि म जनताको घरदैलोमा गएर उहाँहरुकै भावना बुझेर विकास निर्माणका योजनाहरु बनाउनेछु, उहाँहरुकै साथ सहयोगमा पुरा गर्नेछु । आवश्यक नीति निर्माणमा तल्लिन रहनेछु ।
आम नेपालीको समस्या जस्तै हाम्रा समुदायपनि तिनै समस्याबाट प्रताडित छन् । यद्यपी हामीले हाम्रा समुदायको साँस्कृतिक जागरणका लागि अझै गर्न बाँकी धैरै छन् । अरु समुदायभन्दा हामी शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारीमा पछाडीनै छौं । गाउँमा सिप विकासका कार्यक्रम लैजानुपर्छ, सिपसंगै रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गरिदिनुपर्छ, त्यसो नगरिदा जीवनस्तर माथि उकास्न सकिदैन,दिएको सिपको औचित्य हुदैन ।
तपाईको समुदायको लागि केहि सोच्नुभएको छ ?
हो, म हिजोदेखी आजसम्म माझीहरुकै अधिकारको लडाईमा छु । राजनीतिक रुपमा म जुन पार्टीप्रति वफादार भएर हिंडे आज त्यही पार्टीले मलाई विश्वास गरेको छ । झन अहिले मलाई थप हौसला मिलेको छ, आफ्नो समुदायका लागि लड्न बल मिलेको छ । आम नेपालीको समस्या जस्तै हाम्रा समुदायपनि तिनै समस्याबाट प्रताडित छन् । यद्यपी हामीले हाम्रा समुदायको साँस्कृतिक जागरणका लागि अझै गर्न बाँकी धैरै छन् । अरु समुदायभन्दा हामी शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारीमा पछाडीनै छौं । गाउँमा सिप विकासका कार्यक्रम लैजानुपर्छ, सिपसंगै रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गरिदिनुपर्छ, त्यसो नगरिदा जीवनस्तर माथि उकास्न सकिदैन,दिएको सिपको औचित्य हुदैन । साथै महिलाहरुमा राजनीतिक शसक्तिकरण आवश्वक देख्छु, जो राजनीतिक चेतना निर्माणको अभियानमा छन् तिनै महिलाहरुपनि हाम्रा पितृसत्ताका कारण अपहेलित छन् । राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुरा संविधानमै सुनिश्चि भईसक्यो तैपनि त्यो ठाउँसम्म पुग्न पनि हामीलाई मुस्कील भईरहेको सन्दर्भमा माझी समुदायमा झनै राजनीतिक शसक्तिकरण ल्याउनुपर्ने देख्छु । यसबाहेक हाम्रा परम्परागत पहिचान संरक्षण,भुस्वामित्वग्रहण,प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पहुच विकास जस्ता कामहरु आवश्यक देख्छु ।
मुलुक धर्म निरपेक्ष भईसक्यो, हिन्दु धर्म र राजाको वकालत गर्दै हिडेको पार्टीमा हुनुहुन्छ,अल्पसंख्यक आदीवासी जनजातीको हित होला र ?
अवश्य हुन्छ, मेरो बुझाईमा धर्म निरपेक्ष मुलुक भनेको धर्म नभएको देश हो, तपाई हामीलाई थाहा छ नेपाल बहुजातिय,बहुधार्मिक,बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । २०६८ को जनगणनाअनुसार १२५ जाती छन्, १२३ भाषी छौं,यिनका विभिन्न धर्म छन् । हो यि सबै समुदायलाई फुल्न दिनुपर्यो, यसका लागि पुर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राज्यको परिकल्पना गरेका हौं । यहाँ सबै जातजातीले आफ्नै भाषामा बोल्ने,शिक्षा लिने,चाडवाड मनाउने अधिकार हुन्छ । हाम्रा मौलिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले आफ्नै मौलिकतामा गर्व गर्ने हो । धर्म निरपेक्षताको नाममा गरिवीले पिल्सीएका हजारौ आदीवासी जनजाती क्रिश्चियन बनाईएका छन् । छयसलाई केलाउनुपर्छकि पर्दैन ? मलाई लाग्छ गणतन्त्र यो हैन । आज यो मुलुकमा असली अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने कोही छैनन् । कानुनको नजरमा नेता जनता सबै बराबरी हैनन् ? जसको हातमा शक्ति छ, पहुच छ, उहि मान्छे माथि, दिनरात दुख गर्ने तल परेका छन् , यस्तै वेथिति बढेको छ, मंहंगी उस्तै चुलिदो छ, भ्रष्टाचार,लुटपाट,हत्या हिंसा रोकिएका छन ? छैनन्, त्यसैले विधिको शाषनका लागि, शुषासनका लागि अभिभावकको भुमिकामा राजसंस्था खोजेका हौं तर राजतन्त्र हैन । यसे हाम्रो समुदायको पनि हित हुन्छ, देशले फड्को मार्छ ।